राजसंस्था पुनः बहाली हुनुपर्छ : पूर्ण छन्तेल – U News7
राजसंस्था पुनः बहाली हुनुपर्छ : पूर्ण छन्तेल
November 24, 2016 March 18, 20170Comments
राप्ति अञ्चल दांग, शान्तिनगर गा.वि.स. २०१६ सालमा जन्मनु भएका पूर्ण छन्तेल मगर, नेपालको कराँते महासंघको केन्द्रिय सदस्य एंव पश्चिम नेपालका कमाण्डर हुनुहुन्छ । हाल उहाँ बृहत अध्यात्मिक परिषद्का अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले खेलकुद जगतबाट आफ्नो नामलाई सुपरिचित बनाउँनु भएको छ । त्यस्तै उहाँले विभिन्न राष्ट्रवादी संघसंस्थाहरुमा नेतृत्वदायी भुमिका रहेर काम गरिरहनु भएको छ । उहाँ सँग नेपालको समसामयीक राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रको बारेमा विशाल 저금리서민대출 नेपाल डटकमका प्रतिनिधि उज्जवल प्रसाद पराजुलीले गरेको छोटो कुराकानी :-
१) नेपालको राज्य व्यवस्थामा देखिएको विकृति र विसंगतिमा Cheap NFL Jerseys तपाईको धारणा बताइदिनुहोस् ?
म एक राष्ट्रप्रेमि, देशप्रेमि, जनताप्रेमि र राष्ट्रवादी नागरिक हुँ, मैले अहिले नेपालमा अभिभावक विहिन मुलुक भएको देखेको छु । किनभने यहाँ नैतिकता, चरित्रता, राष्ट्रियताबारे काम गर्ने अहिले नेताहरु र दलहरुको अभाव छ । अनुशासन, इमान्दारिता, मातृभुमि प्रति लगाम देखेको छैन । मातृभुमिलाई माया गर्ने र नेपाली जनतालाई समृद्धितिर लैजाने अहिले साझा नेताको साझा नेतृत्वको अभाव छ । भने अर्को तर्फ hockey jerseys नेपाल भनेको देवभुमि हो, ऋषिमुनिहरुको तपस्या गरेको देश हो । अब यहाँ भगवान शिवले पनि महाशुरहरुका विरुद्धमा पनि त्रिशुल उठाएर विद्रोह गरेका थिए । त्यस्तै, हाम्रो यो स्वर्गभूमिलाई नर्क बनाउन खोज्नेको विरुद्धमा विद्रोह गर्न आवश्यक छ । अहिले हामी custom jerseys अविभावक विहिन भएका छौं ।
२) हाम्रो देशको वास्तविक पहिचान के हो ?
विश्वकै सबैभन्दा जेठो देश, हिमवत् खण्डको केन्द्रविन्दु नेपाल हो cheap jordan । हाम्रो देशको पहिचान भनेकै हाम्रो सभ्यता हो । हामीले हाम्रो सभ्यता र संस्कृति र धर्मलाई जोगाउँनु पर्ने अवस्था आएको छ । खासगरी अहिले विश्व समुदायले नेपालको पहिचान भनेकोनै विविधतामा एकता, त्यो एकताको शुत्र भनेकै राजसंस्था, नेपाली सेना र हिन्दु राष्ट्र हो । त्यसैले हामीले हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्न लाग्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
३) नेपालको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरुमा आफ्नोपन र आफ्नो वहसमा छैनन् । उनीहरुको सैदान्तिक धरातल नै बाह्य इशारामा चलेका छन् । यिनीहरुबाट यो मुलुकको भलाई होला भनेर सोच्नु मुर्खता हुनेछ । अहिले देखिएका यि राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वहरु विदेशीका दुतको रुपमा काम गरेका छन् । त्यसैले देश, जनताका लागि हैनन् कमाउ धन्दामा व्यस्त छन् । अझ खासगरी विदेशीहरुको दलाली र गुलामिमा लागेको हुनाले देशको हालत खराव भएको छ । देश र जनताभन्दा पनि मालिकलाई रिझाउने काममा लागेका छन् यिनीहरुबाट यो देशको प्रगति र उन्नति होइन की उदोगति तिर लगाउने काम भैरहेको छ, यसमा अब नेपाली जनताहरुले यिनीहरुलाई बहिष्कार गरेर साझा नेतृत्व ल्याउनु आवश्यक छ ।
४) के नेपालमा राजसंस्था स्थापना गर्न खोज्नु भएको हो ?
अरु विकल्प नै छैन, किनभने यस राजसंस्था अहिले छाताको रुपमा काम गर्न सक्छ । किनभने यो मुलुकलाई विघटन पार्ने काम हुँदैछ । अहिले एक ले अर्को लाई मान्नुपर्ने अवस्था छैन । पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गरेर समृद्ध नेपाल बनाए । शाह वंशको योगदानलाई हामीले भुल्नुहुन्न, राजसंस्था भनेको साझा छाहारी हो, यो छाहारीमा सबै बस्न सक्छन् र अहिले नेपालमा विदेशीहरुले यि दलका नेतृत्वहरुलाई नचाइरहेका छन्, नेपाललाई कमजोर बनाएका छन् । नेपाली जनताहरुको एकतामा खलबल्याउने काम भैरहेको छ । जातिय जातियमा दंगा हुने काम पनि भैरहेको छ । देशलाई जोगाइ राख्नको लागि र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौम नेपाललाई बनाइराख्न पनि राजसंस्थाको आवश्यकता मात्र होइन अपरिहार्य भै सकेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरुले अनेकतामा एकता गरेर यो मुलुकलाई विश्वसामू शान्तिको देश राखिराख्न पनि राजसंस्थाले खेलेको भुमिकालाई भुल्नुहुन्न, अब राजसंस्थाको आवश्यक छ ।<br fake ray bans />
५) हिन्दूराज्य स्थापनाको लागि तपाई लागिरहनु भएको छ नि ?
नेपालको पहिचान भनेकै हिन्दू राष्ट्र हो । विश्वमा एकमात्र हिन्दुराष्ट्रलाई पश्चिमाहरुले तहसनहस बनाए । यसका लागि नेपालमा ८२ प्रतिशत हिन्दुहरुमाथि अपमान भएको छ । त्यसैले पनि हामी सबै हिन्दुहरु मिलेर त्रिशुल बोकेर आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ । त्यसैले हिन्दुराष्ट्र बनाएरै छाड्छौ भन्ने हाम्रो अभियान जारी छ ।
६) वृहत नेपालका बारेमा तपाई के बताउँनुहुन्छ ?
कथित सुगौली षड्यन्त्रमा तत्कालिन राजाले हस्ताक्षर नगरिकन हाम्रो भूमि व्रिटिशले हडपेको थियो । जब हिन्दुस्तानमा व्रिटिशले छोडिसकेपछि त्यो भूमि स्वतः हाम्रो हो, पहिला पनि हाम्रै थियो । त्यसैले टिस्टा काँगडालाई फिर्ता गर्न हाम्रो मार्चपास गरेर भएपनि वीर गोर्खालीहरुको इतिहासलाई पून जिवित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसमा विश्वभरमा छरिएर बसेका गोर्खाली, नेपालीहरुले हातेमालो गरेर भूमि फिर्ता गर्ने तर्फलाग्नु पर्छ, त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दबाब दिने काममा हामी सबैले लाग्नुपर्छ । जय हिन्दुराष्ट्र ।।।
← पोखरामा अल्ट्रालाईट दुर्घटना, २ जना घाइते
माछामा भारतीय एकाधिकार तोडिँदै →